आँचलले बताइन् उदीपको श्रीमती र बच्चाको बारेमा, यस्तो रहेछ वास्तविक ? – Hamrosandesh.com
आँचलले बताइन् उदीपको श्रीमती र बच्चाको बारेमा, यस्तो रहेछ वास्तविक ?
आफ्ना श्रीमानसंग एउटा महिला र बच्चाको तस्विर सार्वजनिक गर्दै विभिन्न अडकलवाजी कुरा बाहिर आएपछि नायीका आँचलले त्यसको स्पष्टिकरण दिएकी छन् । करिब डेढ वर्षको प्रेम सम्बन्ध पछि विवाह गरेकी आँचलले अहिले सामाजिक सञ्जालवाट निकै आलोचना सहनु परेको छ । उनले आफ्ना पति उदिप श्रेष्ठका विगतका कुराहरुलाई लिएर गसिप बनेपछि आँचललाई त्यसको स्पष्टिकरण दिइरहनु परेको छ । लकडाउनका कारण घरमै रहेका उदिप र आँचलका बारेमा विभिन्न अड्कलवाजी गर्दै गसिप भएका छन् ।
पत्रकार ऋषी धमलासंगको अन्तरवार्तामा आँचलका पतिले आफु २ वर्ष सम्म एक फिलिपिन्सकी केटीसंग रिलेशनसिपमा रहेको कुरा स्वीकार गरेका कारण उनैलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा गसिप भएको हो । केही दिन यता उदिपको तस्बिर एक महिला र बच्चाका साथमा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न अड्कलवाजी गरिएका छन् । प्रेम विवाह गरेका यि जोडीले सामाजिक सञ्जालवाट निकै हैरानी भोग्नु परिरहेको छ । जसरी विवाहलाई निकै चर्चाीत बनाएका थिए अहिले उसैगरि उनीहरुको विगतलाई लिएर गसिप भइरहेको छ । हुन त कलाकारहरु सँधै यस्तै गसिपको शि कार हुने गरेका छन् ।
कतिपय सत्य हुन्छन् भने कतिपय अड्कलका आधारमा गसिप बनाइन्छ । तर कलाकारहरुले सबै गसिपका कुराको स्पष्टिकरण दिँदैनन् । कलाकारहरुको ब्यक्तिगत जिवनका कुराहरु सर्वसाधारणका लागि चासोका विषय बन्ने भएकाले पनि कलाकारहरु गसिपका शि कार हुने गरेका हुन् । पछिल्लो समय नायीका आँचल शर्मा र उनका पति उदिप श्रेष्ठका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा अलि बढि नै ब्यक्तिगत कुराहरु बाहिर आएका छन् । आँचलको नायक पल शाहसंगको सम्बन्धलाई गसिप बनाइएको छ भने उनका पति उदिपको नायीका तथा खेलाडी सिपोरा गुरुगं र फिलिपिनो युवतीसंगको सम्बन्धका बारेमा अहिले चर्चा भएको हो ।
सिपोराले दुई वर्ष अघि दिएको एउटा अन्तरवार्तामा आफ्ना प्रेमी भनेर उदिपको नाम लिएकी थिइन् । दुई वर्षको भिडियो पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चीत भएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर उनीहरुको सम्बन्धका बारेमा पनि मिडिया तताइएको छ । केही अनलाईन र सामाजिक सञ्जालमा उदिपसंग एक महिला र बच्चा समेतको तस्बिर सार्वजनिक गरिएपछि आँचल र उदिपले पनि त्यसको प्रतिकृया दिएका छन् ।
उनीहरुले केही मिडियालाई त्यसबारे बताएका हुन् । उनीहरुले उदिपसंग भएको त्यो बच्चा उदिपको साथिको भएको बताएका छन् । फिलिपिन्समा रहँदा एक जना नजिकका साथी रहेको र उनको साथीको बच्चासंग उदिप निकै नजिक रहेका कारण बच्चासंग तस्बिर लिइएको प्रतिकृया दिएका छन् । उनले साथीको बच्चालाई निकै माया गर्ने र उनीसंगको तस्बिर रहेको प्रतिकृया दिएका छन् । तर महिलासंगको तस्विरका बारेमा भने उनीहरुले त्यो फोटोशप मार्फत बनाइएको तस्बिर भनेर प्रतिकृया दिएका छन् । तस्बिरमा उदिपसंग देखाइएको महिलासंग उनको कुनै सम्बन्ध नभएको र त्यो फोटोशपवाट जोडेर बनाइएको भनेर प्रतिकृया दिएका छन् ।